| ထံမှ testosterone propionate အမှုန့်ဖို့အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန် AASraw
ကနေ testosterone propionate အမှုန့်ဖို့အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်
/ဘ‌‌လော့ခ်/testosterone propionate/ကနေ testosterone propionate အမှုန့်ဖို့အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်
အပေါ် Posted 01 / 23 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် testosterone propionate.
1.What testosterone ဟော်မုန်း propionate အမှုန့်ဖြစ်သနည်း 2.What testosterone propionate သံသရာပါသလဲ
testosterone Propionate ထိုးသွင်းဖို့ 3.How? testosterone Propionate ထိုးသွင်းဖို့ 4.How?
testosterone Propionate မှုန့် 5.Effects (နှစ်လိုဖွယ်)6။ ဘေးထွက် testosterone Propionate အမှုန့်များ၏ဆိုးကျိုးများ (နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်)
testosterone Propionate မှုန့် 7.Price အွန်လိုင်း 8.Buy testosterone Propionate အမှုန့်
1.What testosterone ဟော်မုန်း propionate အမှုန့်ဖြစ်သနည်း
testosterone propionate အမှုန့် တိကျတဲ့အန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်: ကပြင်ပမအင်္ဂါ, ဆီးကျိတ်, ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သော, လူ (အသံမြည်ခြင်း, ဆံပင်) အတွက်အလယ်တန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် function ကိုလှုံ့ဆော်။ ဒါဟာအမျိုးသားများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖွဲ့စည်းရေးပါဝင်သည့်လိင်စိတ်နဲ့အာနိသင်ကိုလှုံ့ဆျောနှင့် spermatogenesis လှုံ့ဆော်။ ဒါဟာ luteotrophic နှင့် follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျစေပါတယ်။
testosterone အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းတစ်ခုရန်ဖြစ်ပါသည် - အီစရိုဂျင်, အမျိုးသမီးများအတွက်ရင်သားကင်ဆာအတွက် antitumor အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာပရိုတိန်း, ပိုတက်စီယမ်, ဖော့စဖောရက်, ဆာလဖာ, အရိုးထဲမှာကယ်လ်စီယမ်၏ fixation တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်များ၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, အဆီအစစ်ခံလျော့ကျလာ, ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တစ်ဆွမှု, ဟိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လုံလောက်သောပရိုတိန်းဓာတ်စာနှင့်အတူက erythropoietin များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆျော။
2.What testosterone propionate သံသရာပါသလဲ
testosterone propionate သံသရာမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း hypogonadism, eunuchoidism အတွက်သတ်မှတ်ထားသောလျက်ရှိ၏ ခွန်အားမရှိခြင်း endocrine Genesis, Post-သင်း syndrome ရောဂါ, အထီးသွေးဆုံး; spermatogenesis ချိုးဖောက်၏ရလဒ်အဖြစ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, အန်ဒရိုဂျင်၏မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အရိုးပွရောဂါ, acromegaly, ဆီးကျိတ် hypertrophy ၏ကနဦးအဆင့်။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်း-မှီခိုကင်ဆာ (အီစထိုဂျင်နဲ့ပေါင်းစပ်) အမျိုးသမီး (ရင်သား, သားအိမ်), သွေးဆုံးရောဂါ; hyperestrogenism နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့သွေးထွက်; mastitis, အ mammary ဂလင်း၏နာကျင် premenstrual တင်းမာမှုဖြင့်လိုက်ပါသွား; endometriosis, သားအိမ် fibroids ဖို့အကြောင်းပြချက်များမှာ testosterone ဟော်မုန်း propionate သံသရာကိုသုံးပါ။ Propionate (ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကုသတစ်ခုတွဲဖက်ကဲ့သို့) ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကုသမှု၏ထိရောက်မှုမရှိလာနှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုလျှောက်ထားသည်။
တစ်ဦးဟိုအေးဂျင့်အဖြစ် testosterone ဟော်မုန်း propionate ပရိုတိန်း၏တိုးမြှင်ဖျက်သိမ်း (နာတာရှည်ကူးစက်ရောဂါ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု, ခွဲစိတ်, ဒဏ်ရာ, အများအားဖြင့်ယောက်ျား) ကလိုက်ပါသွားသည့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါဗေဒအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုသည်။
Propionate 50 သို့မဟုတ်အပျော်တမ်းနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအရာ testosterone ဟော်မုန်း propionate 100 မီလီဂရမ်နှုန်း 1 ml အတွက်တတ်၏။ အရင်ကဆိုရင်ထိုသို့ကြုံတွေ့များအတွက် 50 သည်အခြားနေ့က MG အကြံပြုသည် - testosterone ဟော်မုန်း propionate 100 / ml MG ။ အဆိုပါသင်တန်းကို gynecomastia, ရေ retention ကိုများနှင့်အခြားအီစထိုဂျင်ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်စံအစီအစဉ်များအရသိရသည် Anti-အီစထိုဂျင်တာလိုအပ်သည်။ သင်တန်းပြီးသွားချိန်သင်က Post-သံသရာကုထုံးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သံသရာ၏အဆုံးမှာ cortisol blockers (စသည်တို့ကို whey ပရိုတိန်းသို့မဟုတ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, Omega-3, အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်,) ယူမှအကြံပြုသည်။
testosterone Propionate အမှုန့်သုံးစွဲဖို့ 3.How?
ယေဘုယျအကျဆုံး testosterone Propionate များအတွက်သောက်သုံးသော သည်:
50mg မှ 100 နေ့တိုင်း
50mg မှ 100 တိုင်း 2nd နေ့က
ကြောင်း Propionate လှုပ်ရှားမှု timespan ၏နယ်စပ်အနီးရှိင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်း 3rd နေ့အကြွင်းမဲ့အာဏာနိမ့်ဆုံးဖြစ်သင့်တယ်။
testosterone Propionate ထိုးသွင်းဖို့ 4.How?
(ထိုကြွက်သားအလုံအလောက်ကြီးမားလျှင်) ၎င်းသည်မည်သည့်ကြွက်သားသို့ထိုးသွင်းနိုင်ပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခြင်းတင်ပါး, ပခုံးသို့မဟုတ်ပင် triceps ။
testosterone propionate 0.5-1 လအတွင်းဆီဖြေရှင်းချက် 1% သို့မဟုတ်နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ 5% solution ကို၏ 1-2 mL,2ရက်သတ္တပတ်ကနေ 1-2 နေ့ရက်ကာလ၌ intramuscularly သို့မဟုတ်အရေပြားအောက်ဆုံးကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်း propionate ကုထုံးဆေးသမား၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ eunuchoidism, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂလင်းသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဖယ်ရှား testosterone ဟော်မုန်း propionate သောက်သုံးသော၏မွေးရာပါဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျ 0.025 ဂရမ်သို့မဟုတ် 0.050 ဂရမ်သည်အခြားနေ့ဖြစ်၏။ အခြေအနေကို၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဆေးများ 0,005-0,010 ဂရမ်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်တိုင်းကတခြားနေ့ကိုပြောင်းလဲနေကြသည်။
ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူကြောင့် gonadal function ကို၏မရှိခြင်း, ဦးနှောက်အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရန်, အထီးသွေးဆုံးခြင်းနှင့်သွေးကြောများနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းဆေးထိုး 0.010 ဂရမ်နေ့စဉ်သို့မဟုတ် 0,025 ဆ 1-2 days.In ဆီးကျိတ် testosterone ဟော်မုန်း propionate 10ml ၏ကနဦးအဆင့်တွင်တိုင်းလျှောက်ထားသည် 1-2 months.In အခြားနေ့ကသွေးတိုးရောဂါနှင့် angina ၏အစောပိုင်းအဆင့်ဆင့်, ထိုး 0.010-1 ကြိမ်ရက်သတ္တပတ်၏2ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုသင်တန်းဆေးထိုး 15 ဂရမ်ကိုတစ်နေ့ (စုစုပေါင်း 20-0,025 ထိုး) ဖြစ်ပါသည် 20-30 injections.With dysmenorrhea ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးကြောနှင့် climacteric သဘာဝတရား၏အာရုံကြောချို့ယွင်းခုနှစ်တွင်ဆေးထိုး 0.010 ဂရမ်သည်အခြားနေ့, ကုသမှုတစ်ခုသင်တန်းနှစ်ဦးစလုံး radiotherapy, testosterone ဟော်မုန်း propionate ထဲမှာပေးထားအတူတကွနှင့်အတူ (1 နှစ်အောက်) 1.5-60 months.In သားအိမ်ကင်ဆာနှင့်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပါတယ် 0,050-3 လအတွင်းနေ့စဉ် 3.5 ပါ g ၏ထိုးပြီးတော့ဆေးထိုးတစ်လတစ်ပတ်ကို 0,20-0 30 ဆလျှော့ချသည်, နောက်ပိုင်းနှစ်လဆေးထိုးတစ်ပတ်ကို 0.15 ဂရမ်နှင့်အခြား2လအတွင်းဖြစ်ပါသည် - ထို့နောက် 0.10 ဂရမ်တစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု testosterone ဟော်မုန်း propionate ဝက်အသက်တာ၏ထိုးသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်တယ်သွေးတိုးရောဂါနှင့် ascites အသည်းအတွက် testosterone ဟော်မုန်း propionate ၏အသားထိုးဆေး၏အစီအစဉ်များတစ်ဦး၏လက္ခဏာများနှင့်အတူပြင်းထန်သောပုံစံအတွက်အသည်း၏နာတာရှည်အသည်းရောင်အသားဝါဘီနှင့်အသည်းခြောက်ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပါသည်: ပထမဦးဆုံး2ရက်ပေါင်း - 1 ml, ထို့နောက်3ရက်ပေါင်း -2ml,4ရက်ပေါင်း - မူးယစ်ဆေးဝါး၏ 3% ရေနံဖြေရှင်းချက်၏ 1 ml ကို; လာမယ့်7လက်ထက်ကာလ၌ - 1% ရေနံဖြေရှင်းချက်၏5ml,4ရက်ပေါင်း -2ml နှင့်2ရက်ပေါင်း - တစ် 1% solution ကို၏ 1 ml ။
propionate intramuscularly သည် testosterone ဟော်မုန်း၏တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့ထိုး: တစ်ခုတည်း - နေ့စဉ် 0.05 ဂရမ် (တစ် 1% solution ကို၏5ml), - 0.10 ဂရမ် (တစ် 2% solution ကို၏5ml) ။
testosterone Propionate မှုန့် 5.Effects (နှစ်လိုဖွယ်)
အားကစား / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့် (သည်းခံခြင်း, အစွမ်းသတ္တိကိုပိုမြန်ပွနျလညျ)
ကောင်တိုးမြှင် (ကြွက်သား buildup, အဆီဆုံးရှုံးမှု)
တစ်ဦးချင်းဟာ Steroid တစ်မျိုးသံသရာကာလအတွင်းတွေ့ကြုံခံစားအံ့သောငှါနှစ်လိုဖွယ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု၏အရာကြွင်းလေပါဝင်သည်:
ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အရိုးဓာတ်သတ္တုအကြောင်းအရာတိုးပွါး။ ကော်လာဂျင်ဟာခန္ဓာကိုယ် (အရွတ်, ရွတ်, အရိုးနု, အဆစ်, အရိုး) တလျှောက်လုံးဆက်တစ်ရှူးများအတွက်ပရိုတိန်း-based ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်း (သူရဲ) အသံဖြင့်
(စကြွက်သားကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်) ကို IGF-1 နှင့် MGF ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးပွါး
Anti-glucocorticoid အဖြစ်သရုပ်ဆောင်၏လမျးဖွငျ့ကြွက်သားတစ်ရှူးအပေါ်ဆန့်ကျင် catabolic အကျိုးသက်ရောက်မှု။
testosterone Propionate မှုန့် 6.Side သက်ရောက်မှု (သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ)
တစ်ဦးကအကြွေစေ့နှစ်ဖက်အများစုဟို steroids ကဲ့သို့ပင် testosterone Propionate အချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါက normal.Just သိသည်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမယ့်လျက်ရှိ၏။
testosterone Propionate ၏အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအီစထိုဂျင်သို့ aromatize ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုဝန်းရံ။ testosterone သူ့ဟာသူအီစထိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအလယ်အလတ်အဆင့်ကိုပိုင်ဆိုင် - က aromatase အင်ဇိုင်း (အီစထိုဂျင်သို့ testosterone ၏ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်း) ကိုခညျြနှောငျဖို့အလယ်အလတ်ဆှဖှေဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်, မွှေးကြိုင်တဲ့အလယ်အလတ်အဆင့် testosterone အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်မျှော်လင့်ရသည်။ ဤပြဿနာကိုတန်ပြန်ရန်နှစ်ခုဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်:
ဆေး Tamoxifen citrate (Nolvadex) သို့မဟုတ် Clomifene တူသော 1.Selective estrogen receptor Module (SERMs) (အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Androxal, Clomid နှင့် Omifin) function ကို estrogen receptor မှ binding အားဖြင့် - သူတို့ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် binding ကနေအမှန်တကယ်အီစထိုဂျင်တားဆီး။
အဆိုပါ aromatase ဖြစ်စဉ်ကိုဟန့်တားခြင်းနှင့်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် Anastrozole (Arimidex) function ကိုနဲ့တူ 2.Aromatase inhibitors (AIs) ။ Aromatise inhibitors ပို. ထိရောက်သော SERMs ထက်ဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတိုးမြှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကနေအဓိကအားထားနှင့် aromatase inhibitors (ဥပမာ Anastrozole - Arimidex) ကတုဖြစ်ပါတယ်။
ဤရေ retention ကို၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ aromatase inhibitors ခြင်းဖြင့်တုဖြစ်ပါတယ်။
Gynecomastia (ခေါ် Gyno / ခွေး tits):
Gynecomastia ယောက်ျားအတွက်ရင်သားတစ်သျှူးများ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ပတ်ကိုတစ်ရှူးပျတိုးတိုးမြှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါကရွေးချယ် estrogen receptor Module သို့မဟုတ် Aromatase inhibitors ခြင်းဖြင့်တုဖြစ်ပါတယ်။
testosterone အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး testosterone အဆိုပါ 5-alpha-reductase (5AR) အင်ဇိုင်းများကအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်အန်ဒရိုဂျင် Dihydrotestosterone (DHT) သို့ပြောင်းလဲနေသည်ဟူသောအချက်ကိုအတူလုပ်ဖို့ကပိုရှိသည်။
အဆိုပါ 5-alpha-reductase အင်ဇိုင်းဖြစ်သောဦးရေပြား, ဆီးကျိတ်နှင့်အရေပြားအဖြစ်အချို့သောတစ်ရှူးအတွက်ကြီးမားသောပမာဏသာရှိပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone ကဤတစ်ရှူးရောက်ရှိသောအခါ, ယင်း၏ပိုပြီးအစွမ်းထက်အန်ဒရိုဂျင် metabolite DHT သို့လျှော့ချခြင်း၏မြင့်မားမှုနှုန်းခြင်းကိုသည်းခံ။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ သာ. ကြီးမြတ်ပြင်းထန်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း DHT ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဟာတစ်ဦးချင်းစီရဲ့မျိုးဗီဇအပေါ်လုံးဝမှီခိုသည်။ အဘယ်သူမျှမပြောင်ယောက်ျားသင့်မိသားစုအတွက်ရှိပါသည်လြှငျ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပြဿနာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်သင့်ရဲ့ဗီဇထဲမှာပြေးလျှင်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့ဆံပင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်မြှင့်ပေလိမ့်မည်။ ဤသည် Finasteride နှင့်အတူအချို့သောအတိုင်းအတာများနှင့် 2% Nizoral (Ketoconazole) ခေါင်းလျှော်ရည်များသုံးစွဲခြင်းမှတုနိုင်ပါသည်။
အဆီပြန်အသားအရေဆံပင်ကပိုတောက်ပစေသည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်များတွင်ပိုမိုတောက်ပသားမွေးနှင့်အတူယောက်ျားကျန်းမာကြည့် / ပိုပြီးနှစ်လိုဖွယ်ရှိပါတယ်။
အလှည့်အတွက်အဆီပြန်အသားအရေဝက်ခြံ၏ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အချို့သောအတိုင်းအတာအထိဒီထိထိရောက်ရောက်အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်ထွက်လာပါတယ်အန်ဒရိုဂျင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်တိုးမြှင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝက်ခြံ breakouts လျှော့ချ၎င်း၏တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်း Ketoconazole အသားအရေနှင့်ဦးရေပြားအတွက်လိမ်း DHT blocker အဖြစ်ပြုမူဘယ်မှာ Nizoral 2% ခေါင်းလျှော်ရည်၏အသုံးပြုမှုကိုအားဖြင့်တုနိုင်ပါသည် အဆီပြန်အသားအရေ။ ဝက်ခြံများသောအားဖြင့်မရအလွန်ရှည်လျားသည့် testosterone ဟော်မုန်းသံသရာ၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက် steroids ၏ပြတ်တောက်နှင့်အတူရှင်းလင်းနေကြသည်။
လေ့လာရေး Testosterone နဲ့ကျူးကျော်များအကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကချွတ်မသတ်မှတ်မယ်လို့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှလွန်တုံ့ပြန်ရန်စိတ်သဘောထား - ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အမျိုးအစားအမျက်ထွက်သော Roid ။
ပြင်ပ testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်များများပြင်ပ sournce ကနေစရာရှိသောကြောင့်အဆိုပါဝှေး testosterone ဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်ရပ်တန့်။ ရလဒ်အဖြစ်သူတို့ယာယီကျုံ့။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းသံသရာစဉ်အတွင်းကျွန်တော် testicular ကျုံ့အကြောင်းကိုလုပျနိုငျတာမရှိ။ ပြင်ပ testosterone ဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုအဆုံးသတ်မှကြွလာပြီးတာနဲ့သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုတဖြည်းဖြည်းပွနျထားနှင့်ဝှေးသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအရွယ်အစားပြန်သွားပါ။ Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူများကဆေးသောက် citrate (Androxal, Clomid နှင့် Omifin အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ) ယူပြီးအားဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအရှိန်မြှင့်။ hCG (human chorionic gonadotropin) ကိုလည်းလျှင်မြန်စွာသဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု restore ကိုအသုံးပြုသည်။
testosterone နှင့်အတူဖြည့်စွက်နေစဉ်, ယောက်ျားမကြာခဏ hightened လိင်စိတ် (လိင် drive ကို) သတိထားမိ။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းတို့သည် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နှင့်သဘာ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု (ဆေးသောက် citrate သို့မဟုတ် hCG နှင့်အတူ) နောက်တဖန်ပြန်လည်စတင်မီအခါကာလအတွင်းလိင်စိတ်တစ်ကျဆင်းခြင်းသတိထားမိ။
testosterone Propionate မှုန့် 7.Price
အဆိုပါစျေးနှုန်းများအရည်အသွေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။ တက်ဆမျှအနက်ရောင် / မြေအောက်စျေးကွက် Propionate နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတိုးမြှင့်ဖို့ - ဆရာဝန်များကမှတဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် Big ဆေးဝါးအမှတ်တံဆိပ်ကနှင့်သိသာစျေးအကြီးဆုံးလာရန်ခက်ခဲကြသည်။
မှောင်ခိုဈေးကွက် (အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်များ၏မရေမတွက်နိုင်အောင်) ကိုတွင် စမ်းသပ်ခြင်းကျားကန်စျေးနှုန်းများ $ 45 ထံမှ 90ml နှုန်း $ 10 မှအကွာအဝေး (ml နှုန်း 100mg) ဖလားကို။ စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကြောင့်အရည်အသွေးနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အသုံးပြုသောကုန်ကြမ်း, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, ဒေသခံစျေးကွက်အပေါ်ရရှိနိုင်မှုဖို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်း 8.Buy testosterone Propionate အမှုန့်
သင်တို့အဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင် ရောင်းရန် testosterone ဟော်မုန်း propionateခင်ဗျားတို့အခုဒီဆေးဝါး ပြင်ဆင်. , ဖြန့်ဝေဘို့အမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း testosterone ဟော်မုန်း propionate ကိုဝယ်ခြင်းငှါ, ဆရာဝန်တစ်ဦး 's ဆေးညွှန်း dojo.provide ဖို့လိုအပ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်ကိုစွန့်ခွာဘူး။ သင်သာသင်များအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်ရန်လိုခငျြ, 30 မိနစ်အတွင်းငွေပေးချေ၏တိကျသောဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုတုန့်ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ဖို့အမိန့်ပေးရန်ကြှနျုပျတို့၏ website ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
4382 Views စာ
အွန်လိုင်း testosterone Enanthate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိသနည်း
sildenafil citrate အမှုန့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို	အစုလိုက်အတွက် testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်